के बीटा ब्लकरहरू चिन्तामा मद्दत गर्न सक्छन्? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र कल्याण समाचार स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर समुदाय कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी चेकआउट कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के बीटा ब्लकरहरू चिन्तामा मद्दत गर्न सक्छन्?
२०२० को मार्चमा, मेरो प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकसँग मेरो भेट भयो। मैले उनलाई बताएँ कि, म लेक्साप्रोमा भएँ पनि, चिन्ता र उदासीनताको लागि चयनित सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई), अझै पनि कहिलेकाहीं मलाई दिक्क लाग्यो। P बिहान दिनहुँ, जब बच्चाहरू घरमा थिए, भोकाएका थिए, र ध्यान चाहन्थे, मैले मेरो छातीमा बढिरहेको त्रास महसुस गरे। मलाई पसिना आउँदछ र कहिलेकाहीं चक्कर आउँछ। कहिलेकाँही म मेरा बच्चाहरूमा तस्विर गर्दछु, वा मैले अरूबाट टाढा कतै विश्राम लिनु पर्छ। अन्तिम थैंक्सगिभिंग, म दुई दिनको लागि तयारी र पकाउँदा गर्दैछु, केवल मेरो बेडरूममा धेरै खाना खर्च गर्न। मैले मेरो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई भनेँ म मेरो जीवनमा अपरिहार्य तनाव नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन चाहान्छु जस्तो कि म डुब्दै छु।
मेरो डाक्टरले मलाई भन्यो म उडान प्रतिक्रिया गर्दैछु र मेरो शारीरिक लक्षणहरूले चिन्ताको हमला दर्शायो। उनले मलाई प्रोप्रानोलल सिफारिस गरे, बीटा ब्लकर , चिन्ताको लागि। यस प्रकारको औषधि सामान्यतया रक्तचाप नियन्त्रण र मुटुको स्थितिको लागि प्रयोग गरिन्छ। मसँग उच्च रक्तचाप वा कार्डियक समस्याको इतिहास छैन, तर उनले मलाई भने कि यस आरएक्सको सानो डोज लिनु कहिलेकाहीं चिन्ताको सामना गर्ने राम्रो तरिका हो। सामान्यतया औषधी प्रति धेरै संवेदनशील व्यक्तिको रूपमा, म केहि कडा लिन वा सम्भाव्य रूपमा दुर्व्यसन लिन चाहन्न। मैले यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें।
म धेरै खुशी छु मैले गरे! मेरो अपोइन्टमेन्टको एक हप्ता पछि महामारीले स्कूलहरू (र सबै कुरा) बन्द गर्‍यो। मैले मेरा बच्चाहरूसँगै २ 24/7 घर पाएँ र मलाई यस्तो लाग्यो कि अन्तको कुना कुनामा छ। म ती प्रारम्भिक महामारीका महीनामा चिन्ताको लागि प्रोप्रानोलोलको लागि धेरै आभारी छु र अहिले, करीव एक बर्ष पछि घरमा सुरक्षित छ।
डाक्टर प्रदर्शन चिन्ता को लागी वियाग्रा को सिफारिश गर्दछ
सम्बन्धित: चिन्ता हमला बनाम आतंक आक्रमण
के बेटा ब्लकरहरू चिन्ताको लागि प्रभावकारी छन्?
बीटा ब्लकरहरू चिन्ता घटाउने उद्देश्यका लागि सिर्जना गरिएको थिएन।बीटा ब्लकरहरू प्राय: सिफारिस गरिन्छ अफ-लेबल चिन्ताका लागि, वर्णन गर्दछ स्पेंसर क्रोल, MD , Ph.D. फार्माकोलजीमा,पूर्वोत्तर लिपिड संघका निर्देशक।[अफ-लेबल प्रयोगको] मतलब उनीहरू चिन्ता उपचारका लागि युएस एफडीए द्वारा अनुमोदित छैन।
जे होस् ती विशेष गरी एन्टी-चिन्ता औषधिको रूपमा बनाइएको छैन, बीटा ब्लकरहरूले शान्त भावना राख्न सघाउन सक्छन् जब तपाईं उनीहरूलाई लिनुहुन्छ। बीटा ब्लकरहरू हृदय दर कम गर्न सक्छन्, हस्टन मनोचिकित्सक Jared Heathman , MD, व्याख्या गर्दछ। जब चिन्तित हुन्छ, हाम्रो मुटुको दर बढ्छ। यो उचाइले मस्तिष्कलाई प्रतिक्रिया दिन्छ कि हाम्रो शरीर उचित रूपमा आतंकित छ। यसले चिन्तालाई बढावा दिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो मुटुको दर यति चाँडो बढाउने क्षमतालाई अवरोध गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको मुटुले तपाईंको मस्तिष्कलाई प्रतिक्रिया दिन सक्छ कि यो आत्तिँदै छैन, विशेष गरी त्यति नै आशा गरिएको जस्तो होइन। यदि हाम्रो मुटु र शरीर शान्त छ भने, यसले मस्तिष्कलाई शान्त प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। यसले चिन्ता कम गर्दछ।
शेल्डन जाब्लो, MD , बोर्ड-प्रमाणित मनोचिकित्सक, यो प्रक्रिया एक नकारात्मक प्रतिक्रिया लूप कल। उसले चिन्ताको लागि बीटा ब्लकरहरू तोक्छ किनकि उनीहरूले शारीरिक चक्रहरू व्यक्त गर्न शरीरको क्षमता सीमित गरेर यस चक्रलाई तोड्दछन्। शरीरको शारीरिक प्रतिक्रियालाई तनावको सामना गर्न चिन्तित व्यक्तिको मस्तिष्कलाई बढी शान्त र नियन्त्रणमा रहन मद्दत गर्दछ।
दैनिक जीवनमा चिन्ताले असर गर्ने बित्तिकै यसले जीवनको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता ल्याउन सक्छ। केहि चिन्ताका लक्षणहरू यति गम्भिर र अप्ठ्यारो महसुस हुन्छन् कि उनीहरूले अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरू नजिकको अस्पतालतिर जान्छन्। त्यहाँ धेरै लक्षणहरू छन् जसले बिरामीहरूलाई डाक्टर वा आपतकालीन कोठामा ल्याउँदछ जुन चिन्तामा परिणत हुन्छ, डा। क्रोल भन्छन्। चिन्ताका यी शारीरिक लक्षणहरू:
जठरांत्र संबंधी मुद्दाहरू जस्तै पेटको दुखाइ वा पीडा
जस्तो देखिन्छ, बेटा अवरोधक लगत्तै चिन्ता कम गर्नु वास्तवमा औषधीको एक साइड इफेक्ट हो। त्यसोभए, मेरो रक्तचाप दायरामा छैन जुन मलाई औषधी चाहिन्छ जब म चिन्तित महसुस गर्दिनँ, मेरो चतुर पीसीपीले डा। क्रोलले भनेको भनेको प्रायः क्लिनियनको रूपमा फाइदाजनक छ, जुन ती साइड इफेक्टहरूको एक हिस्साको रूपमा प्रयोग गर्ने हो। उपचार प्रत्येक बिरामीको लागि विशिष्ट। म चिन्तित थिए कि बेन्जोडियाजेपाइन (Xanax जस्ता चिन्ताका कारण) ले मलाई मेरा बच्चाहरूको हेरचाह गर्न अत्यन्त व्याकुल महसुस गराउन सक्छ। त्यसो भए यसको सट्टामा मेरो पीसीपी बीटा ब्लकरको साथ गयो।
बीटा ब्लकरहरू चिन्ताको लागि कति लामो हुन्छ?
आधिकारिक रूपमा, आधा जीवन प्रोपे्रानोलको to देखि hours घण्टा हुन्छ, तर सर्तमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ, अगाडि बढ्नुहोस् र केही घण्टा राहतको लागि योजना गर्नुहोस्। बीटा ब्लकरहरू सामान्यतया मौखिक रूपमा लिनको लागि गोलीको रूपमा दिइन्छ। औषधिको तुलनात्मक रूपमा द्रुत रूपमा काम गर्दछ, एक घण्टा जति चाँडो मा चरम तहमा पुग्न। यो तपाइँको प्रणालीमा एक पटक भएपछि, बीटा अवरोधकको कम खुराकको शान्त प्रभाव केही घण्टासम्म रहन्छ।
बीटा अवरोधकको मानक खुराक तपाईंको लक्षण, निदान, र अन्य चिकित्सा सर्तहरूको आधारमा भिन्न हुन्छ। चिन्ताको लागि, एक्लै, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू सामान्यतया कम खुराकमा प्रोप्रेनोलोल सुरु गर्दछन्, आवश्यक छ भने बिस्तारै बढ्दै जान्छ। प्रोप्रानोललको विस्तारित-रिलिज संस्करण पनि छ, तर चिन्ताको लागि, प्राय: गैर-विस्तारित संस्करण प्रयोग गरिन्छ।
बीटा ब्लकरहरूले तपाईंलाई कस्तो महसुस गराउँछ?
बीटा ब्लकरहरूले चिन्ता अनुभव गर्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको भावनाको नियन्त्रणमा बिना शान्त महसुस गर्न र अधिक नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। चिन्ताको उपचारको लक्ष्य भनेको तपाईंको जीवनमा तपाईंको लक्षणहरू बिना तपाईंको जीवन धान्न सक्षम हुनु हो। बीटा ब्लकरहरू सामान्य तनावमा शरीरको एड्रेनालाईन प्रतिक्रिया कम गर्न सक्छन्, ताकि तपाईं अन्य चीजहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
एसएसआरआईहरू जस्तो फरक छैन — जसले चिन्ता र डिप्रेशनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रबन्ध गर्दछ र काम सुरू गर्न केहि हप्ता लिन्छ — बीटा ब्लकरहरू पहिलो प्रयोगमा प्रभावकारी हुन्छन् र कुनै साइड इफेक्ट बिना अन्तराल प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले छोटो अवधिको चिन्ताका लक्षणहरूलाई कम गर्छन्, तर चिन्ताको उपचार गर्दैनन्। यदि तपाईं घडी वरिपरि चिन्ताका लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई बिभिन्न औषधि चाहिन सक्छ, वा अर्को पर्ची पूरक गर्नको लागि बिटा ब्लकरको प्रयोग गर्न।
बीटा ब्लकरहरू घटनाहरू वा सार्वजनिक बोली संलग्नताको अघि स्टेज डराउन र निद्राको चिन्ताको लागि प्रभावकारी उपचार हुन सक्छ। ऐतिहासिक रूपमा, ती प्रायः मानिसहरूलाई 'प्रदर्शन चिन्ता' को लागि सार्वजनिक बोल्ने र अभिनय गर्नु अघि दिइएका थिए, डा। क्रोलले भने। केवल घरमा यो प्रयास गर्नुहोस् सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कसरी औषधीले तपाईंलाई उच्च तनाव घटनाको लागि प्रयोग गर्नु अघि प्रभाव पार्छ।ती सामाजिक चिन्ताको लागि प्रभावकारी हुन सक्दछन् यदि ती पार्टीहरू वा मितिहरू भन्दा पहिले लिइन्छन् - जब कि चिन्ता उत्पन्न हुन्छ सुरक्षित विकल्प।
सबैभन्दा सामान्य पोषण को कमी के हो
डा। जाब्लो भन्छन कि बीटा अवरोधक निद्रा एड्सको ठाउँमा वा निद्रा सम्बन्धी चिन्ता कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि बितेको दिनको बारेमा चिन्ताहरू वा भोलिको दिनको चिन्ताले मुटुको दर बढाउँदछ, निद्रामा प्राकृतिक संक्रमण रोक्न, यो बीटा अवरोधकले त्यो हस्तक्षेपलाई रोक्छ।
डा। कोरोल भन्छन् बीटा ब्लकरहरूलाई COVID-19 सम्भावित मानिसहरूमा कुनै समस्या वा चिन्ता हुँदैन। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ कि एक बीटा अवरोधकले तपाईंको कोरोनाभाइरस जोखिममा असर गर्न सक्छ, औषधी सुरु गर्नु अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्। यस प्रकारको औषधीबाट अन्य प्रतिकूल घटनाहरूको सम्भावना हुन्छ।
सबै औषधीहरूको रूपमा, सम्भाव्यताहरू छन् साइड इफेक्ट :
कम सामान्य, तर कहिलेकाँही गम्भीर दुष्प्रभावहरू हुन्छन्:
तत्काल चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस् यदि तपाईंले एलर्जी प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो जसमा समावेश छ: सास फेर्दा समस्या, घरघर आउने, हात वा अनुहारको सूजन, र / वा छालाको दाग।
मनपर्दैन परम्परागत चिन्ता औषधोपचार , बीटा ब्लकरहरू लत छैनन्। प्रोप्रेनोल र अन्य जस्तो लागी औषधि निर्भरता पैदा गर्दैन (वा लक्षणहरू फिर्ता लिनुहोस् जब तपाईं त्यसलाई लिन रोक्नुहुन्छ) र कहिले काँही लामो समयको लागि सुरक्षित हुन्छ।
प्रोप्रेनोलोल धेरै मानेमा आदर्श छ किनकि बेन्जोडियाजेपाइनहरू प्रायः चिन्ताको उपचारको रूपमा लिइन्छ, यो ड्राईभिंगको लागि कुनै चिन्ता बिना लिन सकिन्छ, पीडाको औषधीको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा मदिराको साथ प्रयोग गरिन्छ, डा जाब्लो भन्छन्। मैले यसलाई सफलतापूर्वक बेंजोडाइजेपाइन, एन्टीडिप्रेससन्ट, र एन्टिसाइकोटिक्सको खुराक घटाउन सिफारिस गरेको छु।
म आमा वा बुबाको रूपमा औषधीको यो सकारात्मक प्रभावतिर आकर्षित भएँ जो अक्सर मध्यरातमा पनि हुनु पर्छ। म प्रोप्रेनोलोल लिन सक्छु र मेरो बच्चाहरूसँग ड्राइभर गर्न वा कुराकानी गर्न पर्याप्त समस्या नभएको कुरा हो, जुन एक्सनेक्स जस्ता बानजोडियाजेपाइनजस्ता अन्य औषधीहरूको लागि म भन्न सक्दिन।
किनकि बीटा अवरोधक एकदम छिटो अभिनय गर्दैछ तर यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई महत्त्वपूर्ण डिग्रीमा हानी पुर्याउँदैन, डा। जाब्लो भन्छन् कि यो चिन्ता विकारमा हुने व्यक्तिको लागि अनौंठो चिन्ता प्रकरणको सम्भावनाको लागि केवल आफ्नो खल्तीमा बोक्नु सहयोगी छ - मात्र थाहा छ। त्यहाँ चिन्ता लक्षण को घटना कम गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो औषधी रातको लागि मेरो बेडरूममा राख्छु जब म मेरो व्यस्त दिमागलाई धीमा गर्न सक्दिन। दिनको चिन्ताले मलाई मेरो सर्वश्रेष्ठ स्वयम् हुनबाट बचाउँदछु। मलाई उनीहरूको हरेक दिन आवश्यक पर्दैन, तर मलाई खुशी छ कि म उनीहरूलाई आवश्यक परे पछि उनीहरू उपलब्ध छन्।
कुन बीटा अवरोधक चिन्ताको लागि उत्तम हो?
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले सामान्यतया चिन्ताको अफ-लेबल उपचारको लागि या त प्रोप्रानोलल वा एटेनोल निर्धारित गर्दछन्।तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कुन औषधि तपाईंको लागि उत्तम फिट हुन सक्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं पूर्ण स्वास्थ्य ईतिहास दिनुहुन्छ।यहाँ दुई बीचको आधारभूत भिन्नताहरु छन्:
प्रोपे्रानोलोल बनाम अटेनोलोल चिन्ताको लागि
ब्रान्ड नाम Indender LA , Indender XL , InnoPran XL टेनोर्मिन
सामान्य नाम प्रोप्रेनोलोल Atenolol
चिन्ताको लागि मानक खुराक खुराक अवस्थाको आधारमा भिन्न हुन्छ र १० मिलीग्रामदेखि mg० मिलीग्रामसम्म हुन सक्दछ। एक्लै चिन्ताको लागि, कम खुराक सामान्यतया निर्धारित गरिन्छ। 25-100 मिलीग्राम
सामान्य साइड इफेक्टहरू लाइटहेडनेस, चक्कर आना, जठरांत्र मुद्दाहरू चिसो हात र खुट्टा, थकान, कमजोरी
अझै सिक अझै सिक अझै सिक
एकलकेयर बचत कुपन प्राप्त गर्नुहोस् कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
जब बीटा ब्लकरहरू तपाईंको लागि सही हुँदैनन्
यदि तपाईंसँग पुरानो, अनियन्त्रित चिन्ता छ भने, तपाईंलाई सामयिक बीटा ब्लकर भन्दा बढी नियमित उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ - जस्तै दैनिक औषधी। केहि मानिसहरु, म जस्तो, एक एसएसआरआई को अतिरिक्त बीटा ब्लकर प्रयोग गर्दछ। डा। क्रोल भन्छन्,सामान्यतया, बीटा ब्लकरहरू राम्रोसँग सहन गरिन्छ र लक्षणात्मक औषधि अन्तर्क्रिया तुलनात्मक रूपमा विरलै हुन्छन्।
zofran एक औषधि परीक्षण मा देखाउनेछ
यदि तपाईंसँग निम्न कुनै सुविधाहरू छन् भने बीटा ब्लकरहरू तपाईंको लागि सही विकल्प नहुन सक्छ।
दम: बीटा ब्लकरहरू दममा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, डा। हेथम्यानले भने। यदि तपाइँसँग छ भने ती समस्याहरूको कारण पनि हुन सक्छ हाइपररेक्टिव एयरवेज किनकि बीटा रिसेप्टर्सले सास फेर्न समस्या बढाउन सक्छ।
अन्तर्निहित चिकित्सा सर्तहरू जसमा औषधि आवश्यक छ: बीटा ब्लकरहरूले ठूलो मात्रामा सामान्यतया निर्धारित औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन, डा। क्रोलले भने। यसमा केहि एन्टिहाइपरप्टेन्टिव र एन्टीएन्जाइनल ड्रग्स, एन्टि-अरिथमिक ड्रग्स, एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, साइकोट्रपिक ड्रग्स, एन्टी-अल्सर औषधि, एनेस्थेटिक्स, कोलेस्ट्रोल कम गर्ने एजेंटहरू, वारफेरिन, मधुमेह औषधि, र केही क्षयरोगको औषधी समावेश छन्। तपाईको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकलाई तपाईले लिनुहुने सबै औषधिहरु बारे बताउनुहोस्, ताकि ऊ वा उनी पनी सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि त्यहाँ कुनै औषधि अन्तरक्रिया छैन।
पुरुष वा बुढो उमेर: बीटा ब्लकरहरू कम उमेरका बिरामीहरू भन्दा उच्च रक्तचापका बिरामीहरूमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् र प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा उच्च रक्तचाप प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, डा। क्रोल बताउँछन्। यहाँ, यसले यसलाई उच्च रक्तचापको लागि औषधिको रूपमा चिन्ताबाट राहतको थप लाभको साथ संकेत गरिरहेको छ। बीटा ब्लकरहरूगर्भावस्थामा प्रयोग गर्न मिल्दैन जबसम्म लाभ जोखिम बढ्दैन। त्यसोभए, यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरसित कुरा गर्नुहोस्।
कुनै औषधि पूर्ण हुँदैन र कुनै व्यक्ति उस्तै छैन। मेरो लागि, म जस्तो अरू धेरै व्यक्तिको लागि, बेटा अवरोधक भावनात्मक जीवन-बचाउने व्यक्ति थियो जुन इतिहासको अत्यन्त गाह्रो समयमा थियो। मेरो बच्चाहरु संग घर मा एक राम्रो समय राख्न को लागी को सकारात्मक प्रभावहरु, एक अभूतपूर्व समय को माध्यम, र व्यक्तिगत तनाव को सामना मा, अमूल्य थियो। म धेरै कृतज्ञ छु मेरो पीसीपीले मलाई बिटा ब्लकर बनाउने सोचेको थियो। तपाईं जीवन नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न र कहिलेकाँही यो तनावपूर्ण हुन सक्छ - चाहे विश्वको प्रमुख घटना हो, वा काम र परिवारको दैनिक मिनेटिया नै हो। बीटा ब्लकरहरूले तपाईको शरीरलाई सिकाउन मद्दत गर्दछ कि, जीवन अलि धेरै रोमाञ्चक भए पनि तपाई यसलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ, यससँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ, र फल्छौं पनि।
साइम्बल्टा बनाम लिरिका: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
वयस्कहरु को लागी मेलाटोनिन को कति मिलीग्राम
hydroxyzine hcl र hydroxyzine pamoate बीचको भिन्नता
कब्जियत बाट छुटकारा पाउन के खाने
म कसरी तुरुन्तै मेरो रक्तचाप कम गर्न सक्छु?
एक राम्रो चीनी स्तर संख्या के हो